Talow Kaalaya Maanta Iga Celiya Malakulmowt! | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Suldaan Nayruus — December 6, 2018
Beri baa waxaa jiray nin sheekh ah oo qaalli ka ahaa magaalo ka mid magaalooyinka Soomaaliya. Magaalada uu sheekhu ka ahaa qaalliga, waxaa deggannaa qabiillo badan uu qabiilkiisu ka mid ahaa. Sheekhu waxa uu ahaa nin caaddil ah oo dadka u dhexeeya oo sida Eebbe faro aanan dhanna uga leexan. Maalinta qof qabiilkiisa ka mid ah iyo cid kale wax soo dhex maraan oo loo yimaado sida diintu ay qabto ayuu mariyaa isaga oo aan cidna u eexan. Marar badan oo dad qabiilkiisa ka mid ah iyo Soomaali kale wax soo dhex mareen ayuu marsiiyey sida diintu qabto. Qabiilkiisa oo dhan ayaa sheekhaas aad uga xumaada caddaaladdiisa.
Dhawr jeer baa sheekha looga yeeray kulammo uu qabiilku yeeshay oo la doonayey in sheekha looga dhaadhiciyo in uu reerka u eexdo sida ay sameeyaan culimada kale. Si kasta wax ugu sheege, ʻFiqi tolkiis kama janno tagoʻ ku wacdiye, si walba inta sameeyeen ayey ka waayeen wax jimic ah.
Sheekhaas waxa jeclaa dhammaan dadka magaaladaas ku noolaa. Waxa ay dadka qaarkiis ku naynaasi jireen Cumar Faaruuq qaarna Cumar Bin Cabdicasiis, iyaga oo ku matali jiray imaamyadii caddaala.
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa sheekhii waxaa ku soo booday nabarkii Malakulmawt. Markii uu arkay in ay tiisii timid ayuu waxa u yeeray odayaashii, waxgaradkii iyo dhammaan intii gaashaanqaadka ahayd ee qabiilkiisii. Markii ay soo ag dhoobteen ayuu waxa uu ka codsaday in ay maanta Malakulmawt ka qabtaan, isaga markaas aad ugu qalinayey kalmado dadkii beerkooda lulay, waxa uuna lahaa, “Tolow kaala iga celiya maanta Malakulmawt. Tolow kaala iga celiya maanta Malakulmawt … Tolow maanta ayaan i diin baahanee ii hiilliya, waan idin baryayaaye, kaala iga qabta ninkaan i kor taagan oo nafta iga saari raba. Tolow, miyiinnaan idin ka dhalan, miyaana ahayn nin reer hebel ah?” Nimankii inta is dhugteen oo cabbaar aamuseen, ayaa ninkii ugu weynaa inta dhiirraday, yiri, “Sheekh, wax kale waan ka qaban karnaa, laakiin dhimasho ma baajin karno.”
FG: Murti Soomaaliyeed ayaa tiraahda: ninkii markhaati been ah furow, Rabbina ku og, kaad u furtay iyo kaad ka furtayna ku og.
Waxaa qoray: Suldaan Nayruus,
Tags: Talow Kaalaya Maanta Iga Celiya Malakulmowt!
Next post Waa Maxay Farqiga u Dhaxeeyo Warqada Codsiga Shaqada ‘Cover Letter’ Iyo ‘CV-ga’?
Previous post 4-Talooyin oo Ku Saabsan Wax Soo Saarka Beeraha